@being_nrb – И®B
नमस्कार म, @being_nrb, म नामले भन्दा आफ्नो ट्विटर ह्याण्डलले नै चिनिन चाहन्छु। यदाकदा मुड चल्दा जानेर या नजानेर कहिलेकाहीँ केही लेखें भने यहाँ पोस्ट गर्छु। कहिलेकाहीँ साथीहरू का लेख पनि समेट्ने गर्छु। तपाईँ हरुका सल्लाह र सुझावको भोको छु। कृपया दुई शब्द लेख्न कञ्जुस्याइँ नगरिदिनु होला। अन्तमाः ब्लग भिजिट गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।
पार्टी, म्युचुअल फ्रेन्ड्स, सिगरेट, अण्ट्रे एण्ड तन्दुरी चिकेन
बिहेको पार्टीको निम्तो, आफ्ना हजारौं पीर मध्यको एउटा तत्कालको पीर चाहिँ अस्ति मंसीरमा सिलाएको कोट असार लाग्दासम्म फीट हुने कि नहुने भन्ने छ। यता भुँडिको बिकास रफ्तार थामिनसक्नु को छ। उता मंसीरमा थन्किएको कोटको हालखबर कहिल्यै बुझ्ने जाँगर आएन। आज सन्दुक चिहाएँ, ह्याङ्गर मा झुण्डिरहेको कोट निकालेँ, पहिरिएर हेरेँँ। भुँडी भीत्र तान्दा जेहोस ठिक्कै देखिँदो रहेछ। कोट पारित भैसकेपछी पालो थियो अन्त्रबस्त्रहरुको। दौरा नै ठटाएर जाम् भने धेरै टाढाको चिनजान, के गिरिजाप्रसादजस्तो भएर जानु? कोट पाईँन्ट लगाएर जाम भने सर्ट चाहियो, टाई चाहियो। फेरी सर्टमा इस्त्री लगाउ, टाईको गाँठो पार, साँँझ भर उकुसमुकुस भएर बस, के के न अड्डाडाको हाकिम जसरी। ह्या त्यो भन्दा कोट भीत्र टिसर्ट र तल जिन्स लगाएर जानेे निर्णय गरेंं, नेपाली फिल्मको हिरोले जस्तो।
पार्टी जान जस्तो दिक्क लाग्दो काम अरु केही लाग्दैन। झन अलि टाढाका चिनजान खासै नभएका हरुकोमा जानु भनेको त झन अभिसापै हो। गएर ठिङ्ग उभियो, कोही चिनेका छन् कि भनेर आँखा डुलायो, कोही भेटे केही राहत अवश्य हुन्छ। हुन त पार्टी होस्ट त चिनेकै हुन्छ, तर उनका आफ्नै ब्यस्तता हुन्छन्, तिनै सँग लठारिएर हिँडिराख्न पनि व्यवहारीक हुँदैन। जेहोस कोही न कोही म्युचुअल फ्रेन्ड्स चाहिँ भेटिन्छन्। तीसँग केही गरि मिसिइयो भने फर्स्टमा उसका साथीसँग परिचय गर्नपर्छ। म्युचुअल फ्रेन्डले नै राम्ररी चिन्दैन आफुलाई, के परिचय गराओस बिचरा? अनि आफैँ हात तेसार्दै मेरो नाम फलानो भन्दै हात मिलाइन्छ। खिस्स हाँसेर प्रायका तालु, कोट, सर्ट र जुत्ता हेर्दा हेर्दै उसले हात मिलाउदै आफ्नो नाम के पो भनेको थियो, बिर्सिन्छ। फेरी नाम सोध्न पनि अलि अप्ठेरो।
यस्तो बेलामा धुम्रपान गर्ने बानी धेरै राम्रो। पार्टी बाहिर निस्किए कोही न कोही या ससानो ग्रुप चुरोटको धुवाँ फुसफुसाउँदै बसेको अवश्य नै हुन्छ। नभए एक्लै नै सहि, बाहिर बसेर यसो चुरोट तान्न बसेपछि कोही न कोही त कम्पनी दिन आइपुग्छन। कोही बुढीको डरले लुकिछिपी, कोही तलतलले रन्थनिदै, कोही मै जस्तो टाइमपास गर्न। त्यहाँ हुने परिचय चाहिँ डिटेलमा हुन्छ, हत्तपत्त बिर्सिईदैन। बल्ल त्यसपछि पार्टीमा फर्किँदा गफ गर्ने साथी हुन्छन्।
म खासै पार्टीमा नजाने भएर हो कि या यो नयाँ ट्रेण्ड हो कुन्नि, रेष्टुरेण्टमा जस्तै पार्टीमा पनि अण्ट्रे भन्ने हुनेरहेछ। पहिलोपटक अण्ट्रे खाँदा त मलाई लाग्यो यति नै होला खाना भनेर। मजाले प्लेटभरीको खाएर एकछिन “चिठ्ठियाँ कलैयाँ रे” हेरिसकेपछी “ल म अब लाग्छु” भनेर बिदाबारी हुन अनुमति माग्दा “कहाँ अहिल्यै? अब खाना खाएर मात्र जाने” भन्दा पो छक्क परेँ। “अघि भर्खर खाएको के हो त?” सोध्न मन त थियो तर सोधिन। बरु अब कुन पेटमा खाना खाने होला भनेर सोच्दै बसेँ। जेहोस समयले मलाई अण्ट्रे चिनायो।
यसपालिको अण्ट्रेको राााातो पारेर पकाएको चिकेनले मलाई १०-१५ वर्ष पछाडि फ्ल्यासब्याकमा पुर्यायो। जब मेरा बाउन दाई र म कहिले दुबई कहिले कतारको लागि एप्लाई/इन्टरभ्यु दिन भनेर महिनैपिच्छे काठमाडौं धाउँथ्यौ। आफन्त थिए काठमाडौंमा जुन आफ्ना भने थिएनन्। तर पनि २-३०० भएनि बच्ने भएकाले लाजै पचाएर पनि पाहुना बनी जान्थ्यौँ। बेलुका खाना खाइसकेपछी कतै बिस्तारा लाइदिन्थे, एकरात सुतेर भोलिपल्ट बिहान सखारै जे कामका लागि आएका थियौँ, त्यसतर्फ लाग्थेउँ ताकि त्यो बास बसेको सरकारी क्वाटरका नोकरको “फेरी भात खाने होस?” वाला नजरबाट बच्न सकियोस। सकेको हिँड्थ्यौँ ताकि भाडाबाट बचेको पैसाले खाजा किनेर खान पाइन्थ्यो। काठमाडौं को ठाउँ, घरी यता गएको छ घरी उता, त्यो खाजाले मात्रै के धानोस? दाई “काठमाडौँका होटलमा खाना खान हुन्न, पखाला लाग्छ” भन्नुहुन्थ्यो, म पनि मुटु दह्रो पारेर “हो तनि दाई” भन्दै एक अर्काको चित बुझाउँथ्यौँ। तर जब ती तन्दुरी होटल अगाडि झिरमा उनेर यही अण्ट्रेको चिकन जस्तै राााातो बनाएर झुण्डाइएका कुखुराका साँप्रा देखिन्थे, मन अत्यन्त भावुक भएर आउँथ्यो, हामी दाजुभाइ एकअर्काका अनुहार हेर्थ्यौँ। पेटको हालत यतिसम्म हुन्थ्यो कि मुख रसाउन त होटलका अगाडि बनाइएका खानाका आइटमका चित्र हरुनै काफि हुन्थे। अनि हामी दाजुभाइ कुनै ठेलामा एक दर्जन केरा किनेर कुनै कुनामा बसेर केराको लन्च गर्थ्यौँ। प्रतिव्यक्ति आधा दर्जन केरा खाएर पेट ढुस्स भएपछी दाई भन्नुहुन्थ्यो, “भाई, अब अघि होटलमा देखेका कुखुराका साँप्रा सम्झी त, खानै मन लाग्दैन”।
Author @being_nrbCategories UncategorizedPosted on June 27, 2018 June 27, 2018 Leaveacomment
रिले गजल ‘गैसकेछ बैैँँश’
नजा नजा भन्दा भन्दै गैसकेछ बैँश
भोली भन्दा भन्दै हिजो भैसकेछ बैँश।
पख् है पढाई सकेसी मोज गरम्ला
पख् है तलब थापेसी मोज गरम्ला
हुन्न, बिहे पछि मात्र…
पख् है छोरो पाएसी मोज गरम्ला
पख् है ,छोरो हुर्केसी मोज गरम्ला
झुटा बाचा गर्दागर्दै गैसकेछ बैँश।
बालाई सर्टिफिकेट चाइयो, पढ्दिएँ
आमालाई बुहारी चाहियो, ल्याईदिएँ
स्वास्नीलाई छोरो चाहियो, पाइदिएँ
छोरोलाई यो चाहियो त्यो चाहियो.. ल्याइदिएँ
यल्लाई त्यल्लाई गर्दागर्दै गैसकेछ बैँश।
अब तपाईँ थप्नोस…
Author @being_nrbCategories UncategorizedPosted on February 28, 2017 Leaveacomment
ती एघार दिन
​म आज के लेख्दैछु म आफैलाई थाह छैन। केही छ मनमा, दिमागमा तर स्पष्ट भन्न आउँदैन। ​म अलिक धेरै सोच्छु भन्छन् सबैजना। मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ तर पनि बाल दिन्न। लेखकै त नभनौं तर केही लेखकीय गुण चाहिँ छ म मा। र यो बिधामा सबभन्दा आवश्यक नै सोच्ने अनि कल्पना गर्ने शक्ति हो। हरेक मानिस आफैँमा सब चिज हो, उसले आफुलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने, त्यो आफैँमा भर पर्छ। सकारात्मक तरिकाले प्रस्तुत गरे कसै न कसैको नजरमा आइन्छ, नकारात्मक तरिकाले प्रस्तुत गरे कसै न कसैको आँखी अवस्य भइन्छ। भैगो, दर्शन छाँट्न पनि मन लाग्दैन, सुन्न पनि मन लाग्दैन आफुलाई, त्यसैले फिलोसोपी बन्द।
जिन्दगीका कुनै मोडमा जान अन्जानमा कति मानिस सँग ठोकिन पुगिन्छ, तर केही ब्यक्ति यति घाँडो भएर आइलाग्छन कि तीनको बारेमा नसोचौँ भनेपनि सोच्न बाध्य नै भइन्छ। उनीहरुलाई थाहै हुन्न, यता भने मन मस्तिष्कमा बवालै भइरहेको हुन्छ। कुरा केही बर्ष अघिको हो। म पनि यस्तै अन्जानमा ठोक्किन आइपुग्नु भएका एकजना महोदयको उपस्थितिले निकै तनावमा थिएँ। गाँड फटाएरै राखेका थिए हेर्नोस। अगाडी भेटे काटेर लाश गायब गरिदिन्थेँ होला, तर उहाँ अदृश्य हुनुहुन्थ्यो। अलि नामर्द टाइपको के। कतै त हुनुहुन्थ्यो तर मेरो पकडबाट निकै टाढा र पनि मेरो जिन्दगीमा नराम्ररी नै असर गरिरहनु भएको थियो। म सोच्दा सोच्दा आफै थाकिसकेको थिएँ, अति भैसकेपछि ‘भैगो म यस्तो हुन हुँदैन, नत्र उस्तै परे पागल भइन्छ’ भन्ने सोच आउन थालेको थियो। मलाई छिटै कतै टाढाको यात्रा तय गर्नु थियो, तर यस्तो अवस्थामा त्यो सम्भव थिएन। अब कसरी सोच्न बन्द गर्ने त भनेर स्वअध्ययन गर्दा ध्यान गर्नु नै उत्तम उपाय भनेर हरेक श्रोतले सुझायो। हातमा फोन थियो, इन्टरनेट थियो, उपायका पनि अप्सन खोज्न औँलाहरु फोनतीर फैलिए।
ओशो तपोवनका बारेमा त धेरैले सुनेका हौँला। विपश्यनाको बारेमा पनि केहीले सुन्नुभएको होला। तर यी राजधानीबासीका लागि मात्रै हुन, मोफसलमा खासै सुलभ छैनन् यस्ता सुविधा। त्यतिकैमा केही बर्ष अघि एउटा मेरो साथीले भनेको याद आयो, ‘बेगनास माथि बिपश्यना केन्द्र खुलेको छ, त्यहाँ जा’। गुगल सर्च गर्दै गएपछि भेटियो लेखनाथमा अवस्थित बिपश्यना केन्द्रको बारेमा जानकारी। फोन गरेँ, उनीहरुले यो सेसन प्याक भएको बताए। मैले केही गरी मिलेमा सम्पर्क गर्नु भनेर आग्रहका साथ मेरो नम्बर छोडेँ।
मनभीत्रको आन्तरिक लडाइँ जारी नै थियो, कहिले भिषण हुन्थ्यो, कहिले शान्त। त्यतिकैमा एकदिन फोन आयो, ‘पर्सी देखी नयाँ सेसन शुरु हुँदैछ, ११ दिन फुर्सद मिल्ने भए आउनुस’ भनेर भने। यस्ता ध्यान स्यानका कुरा हाम्रा समाजमा बुझ्दैनन्, त्यसैले कसैसँग बर्णन गरिरहनु बेवकुफी मात्रै हो। त्यसैले कसैलाई भनिन। तर त्यत्रा दिन गायब हुन केही बाहना अवश्य चाहिन्थ्यो। अरुलाई जे भनेपनि घरमा त के ढाँट्नु, त्यसैले बुबालाई भनेँ। शुरुमा केही अप्ठेरो मानेजस्तो गरे पनि बुबा मान्नुभयो, मुवाले अलि बुझ्नुहुँदैन यस्ता कुरा त्यसैले म केही दिन कतै जाँदैछु, अलि दिनमा फर्किन्छु भनेँ। बस चढेर जाने जाँगर चलेन, त्यसमाथि कमसेकम एउटा साथीलाई त भन्नुपर्छ भनेर एउटा साथीलाई एकठाउँ पुर्याइदे भनेँ। पुगिन्जेल उसलाई नि केही भनिन, जब पुगियो उ पनि छक्क पर्दै फर्कियो।
बेगनास तालछेउको जंगलको बिचमा एउटा ठूलो हल ठडिएको थियो, वरीपरी ससाना घरहरु थिए। म पुग्दा बिदेशी नागरिकले लाइन लागेर उभिएका थिए, केही स्वदेशी (या भारतीय) पनि देखिए। सबैले आआफ्ना आवश्यक समान बाहेकका कुरा लकरमा राख्न पर्ने रहेछ। तौलिया, केही थान कपडा, साबुन, ब्रस बाहेक केही लैजान नपाइँदो रहेछ। त्यसैले लगाएका गहना, फोन र अरु बस्तु पहिल्यै साथीसँग फिर्ता पठाएको थिएँ। नाम लेखाएँ, पर्स र केही कुरा लकरमा राखेँ, रुम नम्बर भेटेपछि रुम खोज्दै गएँ। ठुलो हल ध्यान केन्द्र, साना घर चाहिँ आश्रम रहेछन्। सामुहिक बाथरुम र ट्वाइलेट अलग्गै। पुर्वपट्टी पुरुषका आश्रम, पश्चिमपट्टी महिलाका। यति सुन्दर ठाउँ कि कुरै नगरौँ। तल जंगल, अनि फैलिएको निलो ताल, त्यसमाथि सुन्दर बँगैचा। मोबाइल साथमा ल्याउन पाको भए क्या दामी फोटो खिच्दो हुँ जस्तो लाग्यो। तर यहाँ छिरेपछि फोटो खिच्न त परै जाओस बोल्न समेत नपाइदो रहेछ। ११ दिनसम्म मौनता कायम गर्नुपर्ने रे। अत्यावश्यक परे ब्यवस्थापनका मान्छेसँग नत्र गुरुसँग केही सोध्न मात्रै बोल्न पाइने। घण्टी अनुसार उठ्ने, ध्यान गर्ने, खाने, सुत्ने नियम हुँदोरहेछ। केही निश्चित ठाउँमा निश्चित मार्गबाट जान मात्रै छुट थियो। जेहोस बाहिर निस्केपछि देखिने चारैतिर हरीयो, निलो ताल, खुल्ला आकाश, अनि चराचुरुङ्गीको सुमधुर आवाज। मन यति शान्त हुन्थ्यो कि लाग्थ्यो म स्वर्ग नै आइपुगेँ।
पहिलो दिन बेलुकी ५ बजेतिर घण्टी बज्यो, सबैजना माथिल्लो घरतीर उक्लिए, म पनि पछि पछि गएँ। चियापान को समय रहेछ, चिया, कफी, साना बटुकामा थोरै दालमोठ र भुजा, र एउटा आँपको टुक्रा थियो। मलाई खासै केही मन परेन, त्यसै पनि बेलुका खाना खाइहालिन्छ भनेर त्यो भोजन स्किप गरेँ। कोठामा आएर बसें, अरु दुई जना बिदेशी रुममेट थिए। तर मौनता कायम गर्नपर्ने भएकाले बोल्ने आँट आएन, उनीहरु नि बोलेनन्। झ्यालनेरबाट बाहिर नियाल्दै ढल्दै गरेको साँझ हेर्दै बसेको छु। बिस्तारै अँध्यारोले उज्यालोलाई बिस्थापित गर्दै गयो। भोक पनि लाग्दै गयो। बिदेशी हरु त निदाइसके तर म चाहिँ कतिखेर खाना खान बोलाउलान, कतिखेर घण्टी बजाउलान भनेर कुरेर बसेको छु, रात छिप्पिन लाइसक्यो हेर्नोस, खाना खान बोलाउने छाँटकाँट केही देखिन्न। सायद १० बजे होला टीङ् घण्टी बज्यो, मन हर्षित भएर आयो। बिदेशी हरु उठ्लान र तीनको पछि लागेर जाउँला भनेको, उनीहरु उठ्ने नामै लिएनन्। त्यतिकैमा एक कर्मचारी एकदमै शान्त चालले हाम्रो कोठामा आए, मलाई सुत भनेर हातले ईशारा गर्दै बत्ती निभाएर फर्किए। त्यसपछि बल्ल पो थाह भो, डिनर त त्यही ५ बजे दिएको खानेकुरा रहेछ, जुन मैले खाइन। अब पो भोक झनै जागेर आउन थाल्यो, आन्द्रा मडारिन थाले। भोक भनेको कुरा जति सोच्यो त्यति बढी लाग्ने रहेछ। खिस्रिक्क परेर यस्तै रहेछ आजको दिन भनेर मन बुझाउँदै निदाउने प्रयासमा लागेँ। एक त नयाँ ठाउँ, नयाँ बिस्तारा, त्यसमाथि भोको पेट, कसरी सजिलै निदाउन सक्नु? र पनि कसो कसो निदाएछु, ५ बजे घण्टी बजेपछि ब्युझियो।
बिहानै दुई घण्टाको ध्यान कार्यक्रम पछि नास्ता, फेरी ध्यान अनि खाना, ब्रेक, अनि ध्यान, बेलुकी हल्का चियापान र ध्यान अनि सुत्ने, केही यस्तै दैनिकी थियो। म पहिलो दिनमै भोकले छटपटाएर सुतेको मान्छे, ध्यान भन्दापनि खाना खाने घण्टी कतिबेला बज्ला भन्ने तीर बढी ध्यान जान थाल्यो। ध्यान केन्द्रित गर्छु भनेपनि मन यति चञ्चल कि, घरी खाना, घरी म किन-कुन कारणले यहाँ आएँ भन्ने सोच्दै अशान्त मात्रै रह्यो। र पनि मन भड्किन नदिन सकेको कोशिश गरेँ। मेरो मात्रै हो कि सबैको त्यस्तै हुन्छ कुन्नि, ध्यान गर्दै गयो, अनि दिमागले गुरुले भनेको एउटा शब्द टिप्छ, अनि त्यो शब्दले दिमाग लाई कता पुर्याउँछ कता। के भनिरहेका छन गुरुले केही अत्तोपत्तो, मन त्यो एउटा शब्दलाई पछ्याएर कहाँ कहाँ फ्ल्यासब्याकमा पुगिसकेको हुन्छ। अनि झल्याँस्स भयो, गुरुका कुरामा ध्यान दिन खोज्यो, तर अपुरो शिक्षा हानिकारक हुने त अवश्य नै भयो, त्यसैले सोचेजस्तो परिणाम पाउन भने सकिन। र पनि मलाई जिन्दगीमा आफ्नै परिक्षा लिने मौका मिलेको थियो र म त्यसलाई सदुपयोग गर्न चाहन्थेँ। किनभने त्यो मन माथि बिजयको मात्रै कुरा थिएन, मलाई मेरो धैर्यता जाँच्नु थियो। म आफ्नो मौनता कायम गर्न सक्छु कि सक्दिन त्यो जाँच्नु थियो। अम्मल बिना बस्न सकिँदो रहेछ कि रहेनछ भनेर थाह पाउनु थियो। ग्याजेट बिनाको लाइफ पुनः एकपटक अनुभव गर्नु थियो मलाई। सात्विक भोजन र योगी जिन्दगीको थोरै मात्रै भएपनि अनुभव लिने मौका पाएको थिएँ। नत्र बस्न नसक्ने अवस्था भएमा फर्किन सबैलाई पुर्ण छुट थियो। मैले बस्ने निर्णय गरेँ।
सायद म जस्तै मन चञ्चल भएका अरु पनि थिए, त्यसैले ४० को जमात घटेर ३० जतिको भएको थियो। यो कुरा पनि कसरी थाह भयो भन्देखी, परपट्टी कुनामा एउटी च्वाँक केटी देखिन्थी, त्यो अचेल देखिन छोडेकी थिइ। एउटा इन्डियन जोडी पनि थियो, ती पनि देखिन छाडेका थिए। सबैजना आँखा चिम्लेर ध्यान गर्दै बसेका मौकामा मेरा आँखा भने वरीपरी डुल्ने गर्दथे। अनि बेलाबेलामा गुरुले देख्थे अनि आँखा को भाकाले गाली गर्थे। मानव शरिर न हो, बसेर प्रणाम गर्न झुक्दा पेट अँठिने भएर होला, केही ध्यानी हरुको ग्याँस छुट्ने गर्थ्यो। र लहरै एउटाको पछाडि अर्को बसिने भएकाले अगाडिकोले ग्याँस छोड्दा ठ्याक्कै पछाडि बस्नेलाई अत्यन्तै गम्भीर असर पर्थ्यो। वरीपरीकाले वायु प्रदूषण खेप्ने नै भए। हल्का गन्ध आउनासाथ मेरा आँखा खुल्थे, वरिपरि हेरेर मुख्य पिडितको अनुहार हेर्दा हाँसो छुट्थ्यो तर आफैँलाई सम्हाल्न पर्थ्यो।
बिपश्यना केन्द्रमा सात्विक भोजन खाएपछि मेरो खाना प्रतिको धारणा फेरीयो। पहिलो दुई तीन दिन त लौ भोकैले मरिने हो कि के हो जस्तो लाग्थ्यो, तर भोक भन्दा पनि मन रहेछ मुख्य। जुन कुरा चौथो, पाँचौ दिनमै अनुभव गरेँ। मानिसले आफुले गर्ने श्रम अनुसार को आहार ग्रहण गर्नुपर्ने रहेछ। बिशेषत प्रातकालिन खाना पेटभरी खायो भने रात्रीकालमा केही फलफुल र हल्का खानेकुरा खाए शरिरलाइ पुग्ने रहेछ। हामी चाहिँ गोजेरो फुल्ने गरी खाएर सुत्ने मध्येका पर्यौ।
धेरै कुरा सिक्न पाइयो, मुख्य त SN Goenka का भिडियो हेरेपछि मन प्रफुल्लित हुन्थ्यो। मौनता कायम राख्न सकिएको थियो, अम्मल छोड्न सकिएको थियो, फेसबुक नचलाइ बाँच्न नि सकिएको थियो, साथसाथै ध्यानमा कोशिश गर्दै जाँदा केही बेग्लै अनुभव हुन पनि थालेको थियो। बिशेषत शरिरमा भएका पिडा हरुमा ध्यान केन्द्रित गर्ने कुरामा केही उपलब्धि हासिल भएको थियो। दुखाई अहिले छ, एकछिनमा छैन, अहिले यता छ, एकछिनमा कता हुन्छ कता। दुख भनेको एकैठाउँमा सँधै नरहने रहेछ। त्यही सिकियो तर मन भने अझै बसमा ल्याउन सकिएन। घरी घरी जंगलमा बनकुखुरा कराउँथ्यो, अनि त्यसको मासु याद आउँथ्यो, अनि कुखुराको याद आउँथ्यो, अनि चिकेन आइटम, चिकेन मम, तन्दुरी चिकेन, बिरयानी। घर जान्छु अनि जाँदाको दिनमै चट्ट मसला हालेर बबाल बिरयानी बनाएर खान्छु भन्ने सोच्दै छटपटीन्थेँ। दिमागमा बिरयानीका कुरा खेल्न थालेपछि एसएलसी दिएर मद्रास जाँदा बिरयानी खाएको याद आउँथ्यो, मद्रास सम्झेपछि तिरुपति दर्शन गर्न गएको याद आउँथ्यो। इन्डियाको मन्दिर त्यत्रो भब्य अनि ब्यवस्थित, हाम्रो पशुपति मन्दिर अव्यवस्थित भन्ने सोच आउँथ्यो। पशुपति सम्झेपछि नजिकै भएको एयरपोर्ट याद आउँथ्यो, प्लेन पशुपतिको मन्दिर माथिबाट उड्दा मान्छेको खुट्टा मुनि मन्दिर पर्छ, त्यस्तो बेला पाप लाग्ला कि नलाग्ला?… हे भगवान, यता ध्यान गर्दैछु, एउटा बनकुखुरो के कराएको थियो, मन त मद्रास गएर बिरयानी खाएर तिरुपति घुमेर पशुपति पुगिसक्थ्यो। के के हो के के सोच पनि। मलाई मुख्य यहि समस्याको छुटकारा नपाएकोमा भने दुख लाग्यो।
यसरी ११ दिन आश्रममा बिताइयो। कष्ट पनि भएन, आनन्द पनि भएन। सायद कष्ट र आनन्दको बिचको लाइन नै सुख हो, तर हामी अचेल सुख पैसा, समान र अरुमा खौल्छौं। पाउँदैनौँ, अनि दुखि हुन्छौँ, अरुलाई दोष दिन्छौं, संबन्ध बिगार्छौँ, अरुलाई पनि दुख दिन्छौं, बेखुशी दिन्छौं। यस्तै कुरा सोच्दै आफ्नो गच्छे अनुसारको आर्थिक सहयोग गरेर गेट पार गर्नासाथ चुरोट सल्काउँदै, घर गएर बिरयानी पकाएर खाने कल्पँदै, फेसबुकमा कति नोटिफिकेसन आए होलान् भन्ने सोच्दै घरतीर फर्किएँ। एउटा कुरा के प्रमाणित भयो भने म साकाहरी भएर बाँच्न नसक्ने रहेछु, दोश्रो कुरा म ध्यान गर्न नसक्ने रहेछु। त्यसैले केही सिकें भनूँ भने सोचेको जस्तो केही सिके जस्तो लागेन, नसिकि आएँ भनूँ भने नसोचेको केही न केही त पक्कै सिकें।
र अन्त्यमा “भवत: सर्व माङ्ग्यलाम”
Author @being_nrbCategories UncategorizedPosted on October 6, 2016 October 6, 2016 Leaveacomment
जिन्दगी यस्तो होस…
सानो संसार होस्
केही दु:ख होस्
केही सुख होस्
तर केवल हाम्रो होस् !
न मेरो आँसु झरोस्
न उसलाई रुन परोस्
हाँसो होस या आँसु
कोही बाहिरी व्यक्ति
त्यसको कारण नबनोस् !
कुनै परिधि नहोस्
माया गरिरहन पाइयोस् !
म ऊसँग हारूँ
ऊ केवल मसँग हारोस्
मैले उसलाई जित्न सकूँ
उसले मात्रै मलाई जितोस्
एक-अर्कासँग हार्दै, जित्दै
यो जिन्दगी यस्तै बितोस् !
कि त जिन्दगी यस्तो होस्
या त जिन्दगी नै नरहोस् !
Author @being_nrbCategories UncategorizedPosted on January 25, 2016 January 25, 2016 Leaveacomment
मैले (न)बुझेको राजनीति
नेपालको परिपेक्षमा न २०५२ को आन्दोलन आवश्यक थियो न अहिलेको मधेश आन्दोलन नै। दुवै आन्दोलन केही शक्ति र केही ब्यक्तिको स्वार्थमा टिकेको छ जसमा सर्वसाधारण लाई ढाल बनाइएको छ।
२०४६ मा जब बहुदल आयो, काँग्रेस, एमाले, राप्रपा संसदमा पुगे, तर बाबुराम, प्रचण्ड, मोहनबिक्रम लगायतका नेताका आल्तु फाल्तु पार्टीको बिचल्ली थियो, उनीहरुलाई आफ्नो अस्तित्व जोगाउन केही गर्नैपर्ने थियो, त्यही स्वार्थमा कथित जनयुद्ध जन्मेको हो। र जनयुद्ध सफल हुनुको मात्र कारण चरम गरिबी र बेरोजगारी थियो। त्यसमाथि केही अवशरबादिहरु “माओवादी हुँ” भन्दै ध्वाँस जमाएर लुटेर खान पाईने भएकाले माओवादी बन्ने ट्रेण्ड नै चलेको थियो। ब्यबहार बिग्रेका ब्यापारी, ठगीमा संग्लग्न हरुलाई सबैभन्दा सजिलो उम्कने उपाय भनेको माओवादी बन्नु थियो। बाठा बाहुन क्षेत्री त माओवादीमा पसेर आफ्नो झोली भरे, फँसे बिचरा सोझा जनजातिहरु। माओवादी जिन्दाबाद भन्दै बन्दुक र बम बोकेर कमान्ड सम्हाल्दै युद्धमा अघि अघि हिड्ने ती घोइराहरु यति पछाडि परे कि आज को कता छन. केही अत्तोपत्तो छैन। अहिले बल्ल सबैमा चेत आएको छ कि माओवादी जनयुद्ध आवश्यक थिएन र अहिलेको बर्तमान परिस्थितिको मुख्य जिम्मेवार पनि माओवादी हो।
छनलाई त अरु मधेशबादि दल हरुपनि छन, तर तीनले कहिल्यै केही लछारपाटो लगाउन सकेनन्, न लगाउन चाहे, न कहिल्यै लगाउने नै छन भन्ने आश छ। तीनले जन्माउने भनेको सरिता गिरी र सिके राउत हरु हुन त्यसैले तीनको बारेमा केही लेख्नु या बुझ्न खोज्नु त बेकारै छ। यहाँ फोरमको बारेमा मैले थाह पाए अनुसारको लेख्दैछु। ६२/६३को आन्दोलन पछि बिभिन्न पार्टीमा रहेका एकथरी नेताहरुमा नाटकीय मित्रता देखियो, त्यसैको फलस्वरुप जन्मियो फोरम। मधेशको नारा लिएर उदय भएको यो पार्टी संसदमा चौथो शक्तिशाली पार्टीमा दहरीयो, गठबन्धन सरकारमा दोश्रो ठुलो पद पड्काउने हैसियत बनायो। तर अफसोच, पदमा पुगेपछि कुनै नेताले आफ्ना नारा सम्झिएनन्, सबै पदको भागबण्डामा भुले, अन्ततः फोरमको यति बिजोग भयो कि प्रत्येक चोटी नया सरकार आउँदा फोरम टुक्रिएको हुन्थ्यो। फलस्वरुप पहिलो निर्वाचनमा चौथो शक्ति भएको फोरमलाई दोश्रो निर्वाचनमा राप्रपा नेपाल जस्तो हिजो जन्मेको पार्टीले समेत पछाडि पार्यो। धेरै ठूला भनिएका नेताहरु पराजित भएर संविधानसभा बाट बाहिरिन पुगे। र अबको चुनाबमा झनै खराब भविष्य देखिरहेका यी मधेशी नेतालाई संविधान घोषणा हुनु नै आफ्नो गुमेको राजनीतिक साख ब्युँताउने सुवर्ण मौका साबित हुन पुग्यो। नत्र केही महिना पछाडी फर्केर हेर्यौँ भने देश लगभग शान्त थियो, जताततै एउटै नारा घन्किएको हुन्थ्यो “संविधान जारी गर”। संविधान जारी भयो, र जारी हुनासाथ बर्षौँदेखी कहिले संविधान जारी होला र आन्दोलन गरौँला झैँ गरेर सबै मधेशी नेता उर्लिए, संविधान मा के त्यस्तो लेखिएको थियो र मधेशीले आफ्नो हक अधिकार गुमाए भन्ने कुरा मैले आजसम्म बुझेको छैन। यसो बुझ्न पाए र सही लागे हामी पनि समर्थन गर्ने थियौँ होला।
प्रथमत: यति कुरा आफैँले आफैँलाई स्पष्ट पारौं कि हाम्रो देश नेपाल शताब्दीऔँ देखि यावत् राजनीतिक झमेलाले पछाडी परेको हो। बेलामै बिकास, शिक्षा पाएनन जनताले। त्यसैले हो हामी पछाडी परेकै हौँ। हामी बिदेशीको अधीनमा कहिल्यै रहेनौ तर बिदेशी भन्दा खतरनाक स्वदेशीले हामीलाई यसरी थिचे कि टाउको पनि उठाउन दिएनन्। राजा र राणा, यी दुई भाइरसले देश यति इन्फेक्टेड हुन पुग्यो कि हामी बिश्व भन्दा शताब्दी पछाडी पर्यौँ। मुख्य कुरा जनताले शिक्षा पाएनन्, एकादुई भारत तीर गए पढे, आफूजस्तै चतुर चतुर बटुलेर आए, नानाभाँती राजनीति गरे बचेकुचेको फेरी तीनले लुटे, तीनैका वरिपरि हिँड्ने लठैत हरु आज देशको सत्ता हाँक्दैछन। राणा पालामा भैसक्नुपर्ने बिकास महेन्द्रको पालामा आएर बल्ल भए, नत्र त्यो भन्दा पहिला यो देशमा न गतिलो बाटो थियो, न बिजुली न पानीको ब्यवस्था। जनताहरु यस्ता थिए कि बरु चार घण्टा टाढा पँधेरो जान सक्ने तर आवाज उठाउन नसक्ने। रेलको त झनै कुरा नगरौँ, देशको भौगोलिक अवस्थाले गर्दा रेल चल्न सकेन भनेर सजिलै भन्दिन्छन, उता त्यस्तै पहाडी दार्जीलिङमा पुगेको रेल थोत्रिएर संग्रहालयमा राख्ने उमेरको भैसक्यो। पढाइ त बल्ल राणा शासन हटेपछि सुलभ भएको हो। अलिअलि अक्षर चिनेकाले आफ्नै भकारी भर्न बाहेक अरु काम जानेनन्। राज्यब्यवस्था बदलियो तर देशको अवस्था जस्तो को त्यस्तै रह्यो। यत्रो लेख्नुको मतलब, जब देश अशिक्षाले आक्रांत थियो, अर्धशिक्षित हरुले देशको बागडौर धानेका थिए, यस्तो अवस्थामा समाज मा बिभेद हुनु स्वभाविक हो। तर सबैकुरा बिस्तारै परिवर्तन हुँदैछ, आफै हेर्न सक्नुहुन्छ, आज उमेरले ५० कटेका पहाडीको पिंडीले मधेशी माथि गर्ने ब्यबहार र २५ कटेका पहाडीको पिंडीले गर्ने ब्यबहारमा आकाश जमिनको फरक छ।
हामीलाई “बदमासी गरिस भने देशी आएर बोरामा हालेर लैजान्छ” भनेर डराउन दिइन्थ्यो, अनि हाम्रो बाल मस्तिष्कमै काला बर्णका मधेशी मूलका या भारतीय प्रति नकारात्मक सोच भरियो, तर हामी बुझ्ने भयौँ, बुझेपछी हामीलाई डर देखाउने लाई पनि “यो गलत हो” भनेर बुझायौँ र हाम्रा सन्ततिलाई पनि बुझाउने छौँ। परिवर्तन हुन समय लाग्छ र सुध्रने समय हरेकलाई दिनुपर्छ। मान्छे हरु दिनानुदिन नयाँ कुरा सिक्दैछन, बुझ्दैछन, चेतना फैलँदो छ, नयाँ पिढी साक्षर हुँदैछ, र आशा गरौं केही समयमै ठूलै परिवर्तन देखिनेछ। त्यसैले पुराना उदाहरण दिएर पुरानै ब्यथा कोट्याउँदै पहाडेले यसो गरे र उसो गरे भन्दै कोकोहोलो मच्चाउनु, पहाडे माथि प्रतिशोधको भावना राख्दै हरेक पहाडे माथि औँला उठाउनु ठिक देखिँदैन। ‘जे हुनु भैहाल्यो, अब केही तिमी सुध्र केही हामी सुध्रिन्छौं’ भन्दै सहमतिको बाटोमा लागियो भने अवश्य राम्रा दिन आउनेछन। तर “तीमीहरुको अन्नपानी बन्द गरिदिन्छु” भनेर नाकाबन्द गरेर, आन्दोलन गरेर या पहाडे लाई सरापेर परिवर्तन त यी यत्रो नि हुन्न।
यति र उति प्रदेश, प्रदेश सिमाङ्कन लगायतका बिषय हामी सर्वसाधारणको बुद्धिले भ्याउने भन्दा माथिका कुरा हुन। र यो सबको बारेमा खोतलेर जान्नु पर्ने आवश्यकता पनि छैन साध्य पनि हुँदैन। कि त प्रत्येक जनताले संविधान का एक एक धारा पाठ गर्नुपर्यो र फलानो धारा या बुँदा गलत छन भन्ने प्रमाणित गरेर सच्याउन लगाउनु पर्यो। तर यो ब्यवहारीक हुँदैन त्यसैले संविधान मा सही गलत छुट्याउने, गलत कुरा सच्याउने काम हामीले चुनेर पठाएका नेताको हो। उनीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीको काम जनतामाथि थुपारेर, उनीहरुलाई बहकाएर, कामधन्दा छोड्न लगाएर आफ्नो पछिपछि लगाउने, लाखौँ क्षतिपूर्ति पाउने लोभ देखाई सुरक्षा संयन्त्र माथि आक्रमण गर्न उक्साउने कुनै अधिकार छैन। म बुझ्न सकिरहेको छैन कि मधेशका जनता के कति राजनीति बुझेर आन्दोलनमा होमिएका छन। संविधान भनेको संसोधन गर्न मिल्ने कुरा न हो जसको एउटा आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ। आफैं हिड्ने बाटो बन्द गरेर, आफै चढ्ने सवारी तोडफोड गरेर, आफ्नै ठाउँमा आउने सामान रोकेर, आफ्नै सन्तान पढ्ने बिधालय बन्द गरेर मेहनत गर्नुपर्ने समयमा सयौं दिन आन्दोलन गर्दै बसेर केही परिवर्तन हुँदैन। हुन्छ त केबल आफ्नै अबनति र बरबादी मात्र। भन्दाखेरी उत्पीडित भयौँ भन्ने अनि सय दिनदेखि पेशा, ब्यवसाय ठप्प पारेर पनि खान पुग्ने कस्तो किसिमको उत्पीडन हो यस्तो? बेलाबेलामा सामन्ती पहाडीया को कुरा निस्कन्छ, सामन्ती पारा त बरु अहिले मधेशले देखाईरहेको छ। भेदभाव कहाँ हुँदैन? यो त सांसारीक बिकृति नै हो। चाहे बिश्वको सबैभन्दा बिकसित मुलुक अमेरिका होस या युद्धग्रस्त अफगानिस्तान, जहाँ मानवजाति हुन्छन् त्यहाँ मतभेद हुन्छ, आआफ्नो धर्म, बर्ण या जाति अनुसारको समुह बन्छ, अनि एक समुहका ले अर्को समुह माथि बिभेद गर्छन। त्यही हो समाज भनेको, जहाँ दमन पनि हुन्छ, जहाँ सामन्ती पनि हुन्छन्। उदाहरणको लागि अमेरिकी लाई लिउँ, कुनै समय त्यहाँ काला जाति हरु कति उत्पीडित बनाएर थिए, र आज कालै बर्णको ब्यक्ति त्यहाँका राष्ट्रपति छन।
हो नेपालमा संख्यात्मक रुपमा धेरै भएकाले पनि हुनसक्छ, बाहुन क्षेत्रीहरुकै बाहुल्य छ धेरैतीर, र मधेशी हरुमाथि बर्णभेद भएको थियो, आज पनि भैरहेको छ। तर यो सब भएको अशिक्षा र अज्ञानले हो। परिवर्तनका लागि सबैभन्दा पहिला शिक्षा जरुरी छ, समाज परिवर्तन गर्छु भनेर नेतृत्व लिनेले त्यसका निम्ति पहिले आफु साक्षर भएर संबन्धित उठानका बिषयमा ज्ञाता हुनुपर्यो, अनि अरुलाई बुझाउन सक्नु पर्यो त्यसपछि देशको संविधानको दायरामा रहेर भद्र तरिकाले बिरोध जनाएर नमिलेका बुँदालाई संसोधन गर्न सकिन्छ। राजनीतिको ‘र’ पनि नबुझेका सर्वसाधारण लाई आक्रोशमा ल्याएर, उचालेर सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछु भन्ने कुरा नचिताए पनि हुन्छ। तर बर्तमान परिस्थितिमा जे भईरहेको छ त्यसले पहाड तराई बिचको सम्बन्धमा यति ठुलो फाटो ल्याईदिएको छ कि अब यो सम्बन्ध सुधार्न सदियौँ लाग्नेछ। त्यति नै समय यो अबधीमा देशले भोगेको आर्थिक नोक्सानी भर्पाई गर्न लाग्नेछ। यो आन्दोलनले हुने फाइदा भनेको आन्दोलनका नेतृत्व गर्ने नेतालाई मात्र हो। गलतलाई गलत भन्न सक्ने ब्यक्ति पनि होलान् तराई तीर, छिटै तीनले आवाज उठाउने छन र गलत दिशा तीर गईरहेको मधेश आन्दोलनको दिशानिर्देश गरेर आफ्नो हक अधिकार सुनिश्चित गर्नेछन्, मधेशलाई यो सामन्ती पहाडेको शुभकामना!
Author @being_nrbCategories UncategorizedPosted on November 22, 2015 November 24, 2015 Leaveacomment
महान भारत के महामहान मोदी साबजी,
सर्वप्रथम इस तुच्छ बहादुरकी प्रणाम स्विकार किजिए…!
बात तो बडे बडे करते हो आप
कभी हिट की बात करते है
कभी ऋषिमन कि बात करते है
जिधर जाते हो उधर मिठी मिठी बात
हमको बखुबी मालुम है
असल मैं आप चायँवाला हि ठहरे
सोँच तोह हमेसा छोटी हि रहेगी।
हमारा समस्या तोह पिलो जैसा है
मालुम है पिलो?
गाँडके आसपास आता है ना बडा वाला पिम्पल?
जो दो चार दिन बहुत सताता है,
और कुछ दिन बाद खुदबखुद ठिक हो जाता है,
ईसलिए आप अपना ईलाज किजिए
हम अपनी दवा खुद हि ढुँडेंगे।
आप बहुत शक्तिशाली होंगे,
आपके पास बहुत सारे बन्दुके होंगे,
बम होंगे, आणविक हतियार होंगे
पर हमारे पास कुछ ऐसा है जो किसिके पास नहिँ
वह है धैर्यशक्ति
आप जितना भि जुलुम किजिए
हम उसीसे प्रतिकार करेंगे।
तेल ना बेचना है तोह अपने गाँडमैं डालिए
क्योंकी फास्ट ट्र्याक आपको मिलेंगी नहीँ
लुट्ना हम आपको देंगे नहिँ
हस्तक्षेप हम सहेंगे नहिँ
ईसलिए ईतना बात याद किजिए
आप दुध मांगोगे तोह खिर देंगे
राष्ट्रियता मांगोगे तोह चिर देंगे।
आप अपनि धोती सम्हालिए,
काश्मिरको शान्त किजिए,
खालिस्तानियोँको खालिस्तान दिजिए,
गोर्खाल्यान्ड कि माग पुरी किजिए,
उसके बाद हि हम आपका स्वागत करेंगे
काँचके मेहलोंमैं रेहने वाले
दुसरे कि घरमैं पत्थर नहिँ मारा करते!
Author @being_nrbCategories UncategorizedPosted on November 18, 2015 1 Comment
Author @being_nrbCategories UncategorizedPosted on July 5, 20155Comments